Sat, Jun 23, 2018 | 21:23:06 NST
17:25 PM (9months ago )
काठमाडौं, भदौ २६ – सामसुङले नयाँ स्मार्ट फोन ‘ग्यालेक्सी नोट एट’ सार्वजनिक गरेको छ । नोट सेभेनको ब्याट्रिमा देखिएको समस्याका कारण गएको वर्ष समस्या भोगेको सामसुङले त्यसमा केही परिवर्तन गरे नयाँ फोन ल्याएको हो । नयाँ फोन केही समयअघि सार्वजनिक भएको सामसुङ एस एट र एस एट प्लस भन्दा ठूलो स्क्रिनका साथ आएको छ ।
सामसुङ ग्यालेक्सी नोट एट आधारभूत विशेषता
६.३ इन्चको स्क्रिन (सामसुङ एस एट प्लमा ६.२ इन्चको स्क्रिन छ)
२९६० गुणा १४४० सुपर एमोलिड डिस्प्ले
स्न्याप ड्रयागन ८३५ प्रोसेसर
६ जिबीको र्‍याम (यसअघि चार जिबीको र्‍याम)
६४ जिबीको इन्टरनल मेमोरी (एसडी कार्ड राखेर एक्पाण्ड गर्न सकिने)
३३०० एमएच ब्याट्री (निकाल्न मिल्दैन)
युएसबी चार्ज (वायरलेस चार्जर पनि)
स्केच बनउ सकिने, रिमाइन्डर, नोट राख्न सकिने
एस पेनकै थ्रु स्क्रिन सट लिन सकिने
१२ मेगापिक्सलको डुयल क्यामरा
दुई पटकसम्म अप्टिकल जुम गर्न सकिने
कम प्रकाश भएको ठाउँमा पनि राम्रो तस्बिर लिन सकिने
फोकस फोटो लिन सकिने
पोट्रेट फोटोका लागि उपयुक्त
चलायमान बस्तुको पनि तस्बिर राम्रो लिन सकिने
विश्लेषक के भन्छन् ?
यसअघि सामसुङको ग्यालेक्सी एस एट वा नोट सेभेन नलिएका लागि सामसुङ ग्यालेक्सी नोट एट राम्रो रहेको तर एस एट प्लस वा नोट सेभेन बोकेकालाई यो नयाँ नरहेको विश्लेषकले बताएका छन् । स्क्रिन, र्‍याम र एस पेन बाहेर सबै फिचर पुरानै फोनको रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
यस्तै स्क्रिनको तुलनामा ब्याट्रीको क्षमता कम रहेको विश्लेषण पनि गरिएको छ । एस एट प्लसमा ३५०० एमएचको ब्याट्री रहेपनि नोट एट मा ३३०० एमएचको ब्याट्री छ । यो फोन विश्व बजारमा सेप्टेम्बर १५ देखि उपलब्ध हुनेछ ।
नेपालमा कहिले आउँछ ?
विश्व बजारमा १५ सेप्टेम्बर (भदौ ३० गते) देखि उपलब्ध भए पनि नेपालमा भने सामसुङ ग्यालेक्सी नोट एट दसैँ अघि नआउने भएको छ । नेपालका लागि सामसुङ मोवाइलको आधिकारिक बिक्रेता आइएमएफ प्रालिका दिपक मल्होत्राले दसैँ अघि नै ल्याउने प्रयास गरिएको तर प्राविधिक कारणले सम्भव नभएको बताउनुभयो । तर दसैँअघि नै बुकिङ खुल्ला गरिने र दसैँ लगतै डेलिभरी सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो ।
विश्व बजारमा एक हजार अमेरिकी डलर मूल्य रहेको सामसुङ नोट एट नेपालमा एक लाखदेखि एकलाख पाँच हजार रुपैयाँसम्ममा किन्न सकिने छ । विश्व बजारमा भन्दा नेपालमा केही सस्तो पर्ने मल्होत्राले बताउनुभयो । नेपालमा भन्सार छुट भएका कारण केही सस्तो पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।